Esoterica Yoga sy Meditation
Nanana fotoana izahay,
Ankehitriny dia manana zavatra tokony hatao isika,
Fantaro fa ny matanjaka no mihinana ny osa,
Fantaro fa fotsy ny ronono.
Amin'ny vanim-potoana misy ny teknolojia fampahalalam-baovao, ny iray amin'ireo olana lehibe indrindra amin'ny olombelona dia haingam-pandeha sy feo. Mivezivezy foana ny olona amin'ny ankamaroan'ny zavatra eny amin'ny fiaramanidina, ary ny tabataba dia mameno ny tontolon'ny saina manontolo. Izany dia noho ny fisian'ireo olona mitombo hatrany fa tonga haingana sy haingana kokoa ny fotoana. Ary tsy hoe izany - ny fiainana dia tsy mahatsiaro tena, fa maody.
Ny Bokin'ny Specialty dia manome fahafahana anao hahatakatra ny fomba ahafahanao mifehy ny fihetseham-ponao sy ny eritreritrao ary ny mianatra miaina eto sy amin'izao fotoana izao. Ny maha-zava-dehibe ny boky ao anatin'ny fitsaboana 8 herinandro, izay ahitana ny fizarana sy ny teknikan'ny toko tsirairay, izay ahafahanao mifehy tsara kokoa ny vatanao sy ny sainao. Indrisy fa matetika ny olona no mino fa ny atidoha sy ny vatany dia samy hafa tanteraka sy mifamatotra amin'ny zavatra iray, ny fampivelarana iray, ny iray dia tsy mivoatra. Ny Issledovaniya ihany dia mampiseho ny mifanohitra tanteraka amin'izany. Na dia "manosika" tsikitsiky sy tsiron-tena mirehareha aza dia mety hanatsara ny fihetseham-ponao ao anatin'ny minitra vitsy.
Maro ny olona mino fa tsy manam-potoana firy izy ireo, indrindra fa ny fomba fisainana sasantsasany. Fahadisoana izany - ny fisaintsainana dia hamonjy fotoana bebe kokoa noho ny fanesorana. Ny fahatsiarovan-tena amin'ny fiainana dia izay mety hahatonga anao hahatsapa tsaratsara kokoa ny sakafo, oroka, mahafinaritra ny rivotra. Ny fitantanana ny fiainan'ny olona, ​​fa tsy ny fiainana an-davaka, no tena ilaina hamahana olana maro, anisan'izany ny fahasalamana.
Meditation ny famelan-keloka
Hendry - Yoga Fingers
Yoga ho an'ireo zokiolona
Inona no atao hoe yoga?
Inona no mahasoa?
Mpanjifa Isabel Marant
Ny batisan'ny tongotra miaraka amin'ny peroxyde
Fashion for Women - Fianarana 2016
Alexitimia - inona ity aretina ity ary inona no soritr'aretina?
Sandals amin'ny sehatra 2014
Ny masoandro dia mifofotra amin'ny zaza - soritr'aretina
Ny mpitondra britanika dia nandray anjara tamin'ny fanomanana ny Krismasy tao amin'ny orinasa The Mix
Wallpapers ho an'ny efitrano an'ny ankizy samy hafa firaisana ara-nofo
Ny fampiasana gelatine ho an'ny vatan'olombelona
El-carnitine misy menaka matavy